Nutroplex® (နယူထရိုပလက်စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Nutroplex® (နယူထရိုပလက်စ်)
Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Nutroplex® (နယူထရိုပလက်စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Nutroplex ကို ဗီတာမင်နှင့် သက်စောင့်ဓါတ်များဖြည့်တင်းရန်အသုံးပြုကြသည်။ အစားစားချင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ သွေးအားနည်းခြင်း နှင့် လိုအပ်သောအင်အားများကိုဖြည့်တင်းပေးပါသည်။ ကလေးငယ်များဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ခန္ဓါကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အထက်ပါဖော်ပြထားသော အခြေအနေများအပြင် အခြားသော ရောဂါများတွင် လည်း ဗီတာမင်နှင့် သက်စောင့်ဓါတ်များဖြည့်ဆည်းပေးရန် အသုံးပြုပါသည်။
Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Nutroplex ကိုရောဂါအခြေအနေ အလိုက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသောက်သုံးရပါမည်။ Nutroplex သည် အစားမစားခင်ရော အစားစားပြီးချိန်များတွင်သောက်သုံးနိုင်သော်လည်း စုပ်ယူမှုအားကောင်းစေရန်နှင့် အစာအိမ်ရောဂါများမဖြစ်ပွှားစေရန် အစားနှင့်တွဲ၍သောက်လျှင် ပို၍ကောင်းပါသည်။
Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Nutroplex ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Nutroplex ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Nutroplex ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Nutroplex ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Nutroplex ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
–ယခင် Nutroplex ကိုသောက်စဉ်အခါက ဓါတ်မတည့်မှုများရှိခဲ့လျှင် (သို့)အခြားသော အားဆေးများသောက်ပြီး ဓါတ်မတည့်မှုများဖြစ်ဖူးလျှင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ပြောပါ။
– Nutroplex နဲ့တွဲသောက်လျှင် ဖြစ်နိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဆရာဝန် နဲ့အရင် မတိုင်ပင်ဘဲ အခြားသော ဆေးဝါးများ၊ တိုင်းရင်းဆေးများ၊ အားဆေးများ မသောက်သင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Nutroplex သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မဖြစ်ပါ။ သို့သော် ပုံမမှန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း ဆေးကို ချက်ချင်း ရပ်ပြီး ဆရာဝန် နဲ့တိုင်ပင်ပါ။ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ပြဿနာများသည် ဆက်လက်သုံးစွဲပြီး ၂ ရက် ၃ရက် အတွင်း ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။ အကယ်၍ မပျောက်ဘဲ ဆက်လက်ရှိနေပါကလည်း ဆရာဝန် နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Nutroplex ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Nutroplex က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Nutroplex သည် မိမိတွင်ရှိသော ရောဂါ အခြေအနေကိုပိုဆိုးနိုင်သကဲ့သို့ ဆေး၏ပင်ကိုယ်လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းအင်များလည်းပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်မှာရောဂါများရှိလျှင် ဆရာဝန်များ ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကို ကြိုတင်အသိပေးဖို့အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အချိန်ထိ တစ်နေ့ကို စားပွဲတင်ဇွန်း၂ဇွန်းခန့်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အချိန်ကာလထိ တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၁ဇွန်းခန့်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Nutroplex (နယူထရိုပလက်စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
– 60ml ပါဝင်သောဆေးရည်ဘူး
-250ml ပါဝင်သောဆေးရည်ဘူးပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ညွှန်ကြားထားသောဆေးပမာဏထက်ပို၍ မသောက်သုံးရပါ။ ထိုသို့သောက်သုံးပါက မိမိတွင်ရှိသောရောဂါအခြေအနေကို ပို၍ဆိုးရွားစေနိုင်ပါသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။ ဆရာဝန်ကို ပြောပြနိုင်ရန်သင် လက်ရှိသောက်နေသော ဆေးများအားလုံးကို ယူဆောင်သွားပါ။
Nutroplex ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Nutroplex with Iron and Lysine. https://drugspharmaceuticals.knoji.com/nutroplex-with- iron-and- lysine/. Accessed October 29, 2016.